Maraykanka ayaa sheegtay weerarkii Baraawe - BBC Somali
Maraykanka ayaa sheegtay weerarkii Baraawe
Image caption Ciidammada komaandooska Maraykanka
Xoghayaha arrimaha dibadda ee waddanka Marayknka, John Kerry, ayaa sheegay in weerarro ciidammada gaarka ah ee Maraykanku ay ku qaadeen Soomaaliya iyo Libya ay muujinayso sida ay Washington uga go'an tahay inay ugaarsato kuwa ka mas'uulka ah falalka argagixisanimada.
Isagoo ka hadlayay dalka Indonesia, Mr Kerry waxaa uu sheegay in Maraykanku aanu joojin doonin dagaalka uu kula jiro argagixisada.
Maalintii shalay, ciidan ka tirsan komaandooska Maraykanka ayaa weeraray guri ku yaal magaalada Baraawe ee dalka Soomaaliy oo la sheegay inuu isticmaali jiray hoggaamiye ka tirsan kooxda al-Shabaab oo iyaga la xiriiriyay weerarkii dhowaan lagu qaaday xarunta dukaammada Westgate ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Kaddib dagaal culus ciidammada Maraykanku way ka noqdeen magaalada Baraawe.
Saacado kaddib, ciidammo Maraykan ah ayaa qabtay hoggaamiye ka tirsan al-Qaacida magaalada caasimadda Libya ee Triboli.
Anas al Libi waxaa loo raadinayay inuu ku lug lahaa weerarradii lagu qaaday safaaradaha Maraykanka ee Tanzania iyo Kenya 15 sano kahor.